Momba anay - Zhejiang Shsung Digital Technology Co., Ltd.
SW Label dia mifantoka amin'ny famolavolana karazana sticker
Ny orinasan-tsoratadidy SW dia any amin'ny Faritanin'i Zhejiang, manana famokarana matihanina 22 + taona sy fampiharana ny traikefa amin'ny sticker izahay
SW Label Afaka manome habe samihafa amin'ny horonan-taratasy Jumbol, horonan-taratasy kely mankany amin'ny takelaka ary habe A3 / 4. Andramo izay fara herinay hahatratrarana ny filanao manokana.
Ny vokatra mifaninana ifotony dia ny sticker Digital Label, ho an'ny UV Inkjet, Memjet, HP Indigo, Laser sns. Ny karazany dia manan-karena ary ny hatevin'ny hateviny dia manomboka amin'ny 50um ka hatramin'ny 450um. Tena nanao ilay "MAHARITRA, MANDAINGA & MORA" tamin'ny vanim-potoana marika nomerika .
Ento ny loko nentaninay ho amin'ny fanontana marika nomerika
fisakaizana sy firindrana
Manompo an'i Sina rehetra,
mandeha amin'izao tontolo izao
SW Label dia mifantoka amin'ny famolavolana karazana sticker. Ny stock stock dia azo voafidy ho taratasy mifono vy, mifono vy, maimaim-poana amin'ny hazo, mafana, famindrana mafana, Kraft, PP, PET, PE, PVC, ary ny loko samihafa amin'ny loko toy ny mangarahara volafotsy, volamena, laser, satin ary zanaka lahy. Ny Liner dia azo voafidy ho Yellow Kraft, Silicone, Glassine, PET, PP ary CCK. Ary ny tena manan-danja indrindra dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana ho an'ny adhesive, mamokatra amin'ny hafanana, rano miorina ary Lakaoly mifototra amin'ny solvent, ho an'ny fampiharana maharitra, azo esorina, mangatsiaka lalina, hazokely avo sy fampiharana famehezana hafanana.
Ankoatr'izay, SW Label dia mamokatra stikerika adhesive mahazatra ihany koa ho an'ny marika divay, marika kodiarana, Tags, mari-pamantarana mafana sy famindrana, marika Wet Tissue, sticker DIY maroloko, Boarding Pass ary Cloth Ribbon sns.
------ Fitaovan'ny zavamaniry ------